कस्ता हतियार छन् चीनसित ? :: a1nepal.com.np
कस्ता हतियार छन् चीनसित ?
चिनियाँ फौजले ३० जुलाईमा सम्पन्न सैनिक परेडमा कैयौँ नयाँ हतियार प्रदर्शन गरेको छ । यो अवसर थियो, १ अगस्टमा पूरा हुने पिपुल्स लिबरेसन आर्मी (पिएलए) को ९० औँ वार्षिकोत्सव । १२ सयभन्दा बढी सैनिक जवानले यसमा भाग लिएका थिए । यस अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ सैनिक पोसाकमा उपस्थित थिए । परेडका क्रममा उनले सेनालाई आधुनिक बनाउने बताए । उनले भने— युद्ध लड्न र जित्नका लागि एक शक्तिशाली सेना तयार गरिएको छ । सी सत्तामा आएपछि चिनियाँ सेनामा निकै ठूलो परिवर्तन आएको छ । यो अधिक सक्षम र विश्वस्तरीय आधुनिक सेना बनेको छ ।
चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयका अनुसार परेडका क्रममा करिब ६ सय सैनिक हार्डवेयर प्रदर्शन गरिएका थिए । जसमा करिब आधाजति चाहिँ पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शित गरिँदै थियो । चिनियाँ सैनिक जवानले सेनाको नियमित पोसाकको साटो युद्धका क्रममा लगाउने कपडामा परेड गरेको यो नै पहिलो अवसर थियो । यहाँ सो अवसरमा पहिलोचोटि प्रदर्शित गरिएका ती हतियारको चर्चा गरिँदै छ ।
पिएलए रकेट फोर्सको स्थापना डिसेम्बर २०१५ मा भएको थियो । सैनिक परेडमा उसको प्रदर्शन यो नै पहिलो हो । रकेट फोर्सले पाँच मोडल प्रदर्शित गरेको थियो, जसमा नयाँ र पुराना दुवै प्रकारका मोडल थिए । यिनमा परम्परागत रकेटदेखि लिएर न्युक्लियर मिसाइलसम्म सामेल थिए ।
यी रकेटमा नयाँ जेनरेसनको डगफेँग (डिएफ)–३१एजी इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालेस्टिक मिसाइल पनि सामेल छ, जसले १० हजार किलोमिटरसम्म प्रहार गर्न सक्छ । यसका अतिरिक्त मध्यम दूरीसम्म प्रहार गर्ने ब्यालेस्टिक मिसाइल डिएफ–२६ तथा डिएफ–१६ जी ब्यालेस्टिक मिसाइल पनि थिए । डिएफ–१६ जीलाई बेइजिङमा भएको पहिलो सैन्य परेडमा प्रदर्शित गरिएको थियो ।
हङकङस्थित सैन्य विश्लेषक लोङ क्वाक लोङले ताइवानी समाचार एजेन्सी सिएनएलाई बताए— चीनमा मिसाइललाई नामकरण गर्ने वर्तमान प्रणालीअनुसार ‘ए’ परमाणु हतियारका लागि हुन्छ भने ‘बी’ सामान्य हतियारका लागि र ‘जी’ संशोधित संस्करणका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
चिनियाँ सरकारी टिभीले परेडका क्रममा कमसेकम १६डिएफ–३१एजी मिसाइल देखाएको थियो । यसलाई डिएफ–३१एको विकसित रूप मान्ने गरिन्छ । यसका अतिरिक्त नयाँ हवाई डिफेन्स मिसाइल पनि परेडमा देखाइएको थियो । यिनमा एचक्यु–९बी तथा एचक्यु–२२ जस्ता मिसाइल पनि सामेल थिए । एचक्यु–९बी जमिनबाट हावामा प्रहार गर्न सक्षम छ भने एचक्यु–२२ विङ विमान तथा क्रुज मिसाइललाई रोक्ने काममा प्रयोग हुन्छ । सिंगापुरको पत्रिका द स्ट्रेट टाइम्सको रिपोर्टअनुसार एचक्यु–९बी मोबाइल एयर डिफेन्स सिस्टम एचक्यु–९ को विकसित रूप हो, जसलाई विवादित दक्षिण चीन सागरमा तैनाथ गरिएको थियो ।
यी चमचमाउँदा हतियार देख्दा लाग्छ— पिएलएले १९२७ मा नानचाङमा आफ्नो उदयदेखि आजसम्म आइपुग्दा निकै लामो दूरी तय गरेको छ
आधुनिक फाइटर जेट
जे–१६ फाइटर जेटलाई पहिलोपटक जनतासामु ३० जुलाइको परेडमा प्रदर्शित गरिएको थियो । यसलाई चेङयाङ एयरक्राफ्ट कर्पोरेसनद्वारा विकसित गरिएको हो । यो जे–११बी प्रविधिमा विकसित गरिएको छ । जो रुसको सुखोई–३०एमकेकेकै संशोधित रूप हो ।
चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार जे–१६ दुई सिट र दुई इन्जिनवाला फाइटर विमान हो । जसलाई कैयौँ उद्देश्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । चाहे त्यो हावाबाट हावामा प्रहार गर्ने विषय होस् या हावाबाट पानीजहाजमा । यो विशेषगरी नौसैनिकका लागि तयार गरिएको छ ।
चिनियाँ सैन्य विश्लेषक यिन झूले चाइना न्युज सर्भिसलाई बताए— जे–१६ मा प्रहार गर्ने जबर्जस्त क्षमता छ । यसमा जडान गरिएको राडार संसारकै सबैभन्दा राम्रो छ । राडारबाट जोगिएर निस्कने कार्यमा सबैभन्दा भरपर्दो फाइटर जेट जे–२० को पनि त्यस परेडमा झलक देखाइएको थियो । यसलाई चेङ्दु एयर स्पेस कर्पोरेसनले तयार गरेको हो । जे–२० चीनमै तयार गरिएका फाइटर विमानको चौथो जेनरेसन हो, जो लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न सक्षम छ ।
विद्युतीय युद्ध उपकरण
पिएलएले अत्याधुनिक विद्युतीय युद्ध उपकरण पनि प्रदर्शन गरेको छ । उसले पहिलोपटक आफ्नो सूचनातन्त्रको क्षमता सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरेको छ । परेडमा विद्युतीय सूचना प्रविधि प्रदर्शन गर्ने टोलीका प्रमुख वु फेइले भनेका छन् कि लडाइँको मैदानमा शत्रुको राडारलाई असफल बनाउने १६ विद्युतीय उपकरण परेडको क्रममा प्रदर्शित गरिएका थिए ।
टिप्पणीकारका अनुसार चिनियाँ सेनाको आधुनिकीकरणका साथै चीन यस विषयमा अमेरिकाको समकक्षमा पुग्दै गएको छ । सिन्ह्वाले पिएलको उदयलाई स्मरण गर्दै लेखेको छ— यी चमचमाउँदा हतियार देख्दा लाग्छ— पिएलएले १९२७ मा नानचाङमा आफ्नो उदयदेखि आजसम्म आइपुग्दा निकै लामो दूरी तय गरेको छ । तर, सैन्य विशेषज्ञका अनुसार यी सब तयारीका बाबजुद चिनियाँ सेना वास्तविक लडाइँको परिस्थितिका लागि तयार छैनन् । यीमध्ये अधिकांश हतियारको वास्तविक लडाइँमा उपयोग गर्न बाँकी नै छ ।
(बिबिसी हिन्दीको समाचार मनिटरिङ)
बिबिसी हिन्दी डट कमबाट
इराकमा आइएस जिहादी समूहको अपहरणमा परेका ३९ भारतीयको हत्या श्रीलंकामा मुसलमानविरुद्धको दङ्गाका कारण सङ्कटकाल भारतिय प्रधानमन्त्री मोदीको “इक्जाम वारियर” नाम पुस्तक सार्वजनिक, के छ त मोदीको “इक्जाम वारियर” मा ? उत्तर कोरियाले आणविक आक्रमण गर्दै , प्रतिकार गर्दा पनि निकै खतरनाक ! अमेरिकी उपराष्ट्रपति पेन्स इजरायली संसदमा बोलिरहदा अरव सांसदको अवरोध क्यालिफोर्नियाको डढेलो अझै नियन्त्रणमा आएन , आगलागीमा परी हालसम्म १५ जनाको मृत्यु, १८० बेपत्ता युद्धको चरम चपेटामा सिरियामा, पाँच बर्षमा ३ लाख ३० हजार मारिए भारतको राष्ट्रपतिमा भाजपा नेता रामनाथ कोविन्द विजयी यस बर्षको प्रतिष्ठित ओस्कार अवार्ड चर्चित फिल्म स्टार ज्याकी चयनलाई डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टीबाट आधिकारिक उम्मेदवार घोषित
← कुवेतबाट उद्धार गरिएकी महिलाको पीडा	आफ्नो कार्यकालमा भएका उल्लखनिय कार्यहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै दिपक ओलीद्वारा उमेदवारी घोषणा →
त्यहिँबाट आएकी म -कविता
केन्द्र सरकार भन्दा स्थानिय सरकारमा वढि चिन्ता, सीमामा काँडेतार किन लगाइयो ?
कोरोना, राजनीतिक बेईमानी र रेस इप्सा (कल्पना बिरुद्द यथार्थ)